လုံခြုံစွာ ဂိမ်းကစားမှု - ဂိမ်းကစားသူများ နှင့် မိဘများအတွက် လမ်းညွန် | Codashop Blog MM
Home Games လုံခြုံစွာ ဂိ...
လုံခြုံစွာ ဂိမ်းကစားမှု – ဂိမ်းကစားသူများ နှင့် မိဘများအတွက် လမ်းညွန်
လုံခြုံစွာ ဂိမ်းကစားနိုင်ဖို့ ဂိမ်းကစားသူများ နှင့် မိဘများအတွက် အရေးကြီးပါတယ်
ဂိမ်းက ဒီမျိုးဆက်အတွက် အပန်းဖြေခြင်း နှင့် ဖျော်ဖြေမှုအတွက် လူကြိုက်များလာပါတယ်။ ပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတော့ လူတိုင်းက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နှင့် ကျန်းမာသော ဂိမ်းကစားမှုဖြစ်စေရန် ကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်အချို့ကို လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်မှာ ကျွန်တော်တို့က ကောင်းမွန်တဲ့ ဂိမ်းကစားတဲ့ အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေဖို့ အချို့အကြံပြုချက်များနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကို ရေးပေးထားပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
သင်၏ မျက်လုံးများကို ကာကွယ်ပါ။ အနားယူပါ။ ဒီအချက်ကို အလေးအနက်ထားပါ။ ဂိမ်းကို မာရသွန်လိုကစားခြင်းများအတွက် မကြာခဏ အနာယူရန် လိုအပ်ပါတယ်။ မစ်ရှင်များပြီးဖို့ (သို့မဟုတ်) တိုက်ပွဲတွေကိုနိုင်ဖို့ကို နာရီပေါင်းများစွာ ဖန်သားပြင်နဲ့ မျက်လုံးကို ကပ်ထားပြီး မနေပါနဲ့နော်။ တီဗီ / မော်နီတာကို ကြာရှည်စွာထိတွေ့ခြင်းက မျက်လုံးကို ပင်ပန်းစေနိုင်တယ်။
အိပ်ရေးမပျက်ပါစေနဲ့။ ကဲ သင့်ရဲ့ လက်ရှိဂိမ်းကို လုံးဝစွဲလမ်းနေပြီး သင်က နောက်ထပ်မစ်ရှင်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့ သို့မဟုတ် လက်နက်အသစ်ရဖို့ ဂိမ်းဆော့တာမရပ်နိုင်ဘဲဖြစ်နေပြီလား။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့် ဂိမ်းကစားသူများဟာ သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲခံမှု ဘယ်လောက်ပဲကောင်းပါစေ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ဖို့ကို လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ ဂိမ်းက သင့်ရဲ ပုံမှန် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နာရီကို မဖြတ်ဆီးစေပါနဲ့။ ၎င်းသည် သင်၏ အိပ်စက်တဲ့အချိန်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေပြီး နောက်ဆုံးမှာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ အပြည့်အဝအိပ်စက်ခြင်းက သင်ရဲ့ စွမ်းအားကို ပြန်လည်ပြည့်စေပါတယ်။
လက် နှင့် လက်ကောက်ဝတ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့ Esports ကို သင်၀ါသနာပါရင် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ကစားနေစဉ်ပင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါတယ်။ Controller များ ကို အသုံးများခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာစာရိုက်ခြင်း နှင့် ကီးဘုတ်များပေါ်မှာ လက်ဖြင့်နှိပ်ခြင်းတို့က Carpal Tunnel Syndrome ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သင့်၏ ဂိမ်းကစားရင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုမည့် လမ်းကြောင်းကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားရင်း နားချိန်မှာ သင်ရဲ့ လက်နှင့်လက်ကောက်ဝတ်များကို ဆန်းစစ်ဖို့ ရိုးရှင်းသော လေ့ကျင့်ခန်းများရှိပါတယ်။
Motion gaming က သင့်ကို လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ စျေးကွက်ထဲမှာ အားကစားအတွက် လူကြိုက်များတဲ့ ဂိမ်းတစ်ချို့ကတော့ အကအတွက် (Just Dance, Dance Revolution) နှင့် Rhythm Title (Guitar Hero) ကဲ့သို့သော ဂိမ်းများရှိသည်။ ဒါကတော့ ငြိမ်ငြိမ်နေနေတဲ့သင့်ရဲ့အချိန်တွေကို လှုပ်ရှားစေသော တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်စေမဲ့ 2-in-1 package ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Virtual Reality (VR) ဂိမ်းတွေကတော့ လက်ဝှေ့ထိုးခြင်း နှင့် squatting လုပ်ခြင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကဲ့သို့သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို အတုယူရန် ကောင်းမွန်သော platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းဆော့ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ဂိမ်းကစားခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ Co-op mode ကို ကစားခြင်းက နီးစပ်သော သို့မဟုတ် မိုင်များစွာကွာ၀ေးနေသော သူငယ်ချင်းများ အချင်းချင်းကိုရင်းနှီးချစ်ခင်စေပါတယ်။ ဂိမ်းကစားရင်း သူငယ်ချင်းများအချင်းချင်းစကားပြောတာကလဲ စိတ်သက်သာစရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Animal Crossing ကို ကစားကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဂိမ်းကစားခြင်းက သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတာက ကောင်းတယ်ဟုတ်?
မိဘများအတွက် လုံခြုံရေးထည့်သွင်း စဉ်းစားချက်များ
ကလေးတွေ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကစားနေစဉ် မိဘတွေက သားသမီးများရဲ့ လုံခြုံမှုကို မြှင့်တင်ရာမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဏမှာ ပါ၀င်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာ နှင့် အသုံးပြုနိုင်မှု နှစ်ခုလုံးအတွက် အဓိကသော့ချက်ကတော့ အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ထားခြင်းက အထောက်အကူပြုပါတယ်။
အသက်အရွယ်ခွဲခြားခြင်း။ ဂိမ်းတစ်ခုကစားသင့်တဲ့ အသက်အရွယ် နှင့် သင့်တော်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာက အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ESRB (Entertainment Software အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဘုတ်အဖွဲ့) ကို သင်သိပါသလား? ဂိမ်း (သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်း) နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကို ဖော်ပြထားသောကြောင့် မိဘများ နှင့် သုံးစွဲသူများက ဘယ်ဂိမ်းက မိမိ မိသားစုအတွက် သင့်လျော်သည်ကို သိနိုင်ပါတယ်။ ESRB အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်တယ်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အမျိုးအစားများ ၊ အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်များ နှင့် Inteactive Elements တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြချက်များနှင့်အတူ ESRB အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များက သင်၏ကလေးအတွက် ဂိမ်းတစ်ခုနှင့် သင့်တော်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန် ပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင့် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် Privacy။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဂိမ်းအများစုဟာ မကစားခင် မှတ်ပုံတင်ပြီး အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေက အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့် ၎င်းတို့ မျှဝေသည့် privacy အသေးစိတ်ကို စောင့်ကြည့်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကလေးများကို စကားဝှက် (Password) များ ဖန်တီးရန်လမ်းညွှန်ပါ။ နှစ်ဆင့်ခံမှုနည်းလမ်း(Two Factor Verification Method) သည် လုံခြုံရေးအဆင့်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကလေး၏ ပရိုဖိုင်းတွင်ရှိသော တည်နေရာအသေးစိတ်ကို ဖြတ်ထားခြင်းက ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အွန်လိုင်း ပေါ်မှ မကောင်းသော အပြုအမူများ တာဆီးမှု။ Chat နှင့် ဆက်သွယ်မှု ပါ၀င်သောကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိသောကစားသူမျာ၏ မကောင်းသော အပြုအမူများကို ရှောင်ရှားရန် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဂိမ်စက်တွင်တွင် ရရှိနိုင်သည့် မိဘထိန်းချုပ်မှုများကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် အုပ်ထိန်းသူများက ယင်းပြဿနာများကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ စကားပြောခြင်း ကဲ့သို့သော အချို့သော လုပ်ဆောင်မှုများကို အကန့်အသတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းသည်လည်း အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။
ဂိမ်းကို သင်ကိုယ်တိုင်စမ်းဆော့ကြည့်ပါ။ အပြည့်အဝယုံကြည်မှုမရှိလျှင် ဂိမ်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ကစားပါ။ ဒီလိုလုပ်တော့ သင်ကိုယ်တိုင်​​ ဂိမ်းအကြောင်းနဲ့ ဂိမ်းပုံစံကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ အကြမ်းဖက်မှု၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း နှင့် အခြား မကောင်းတာတွေက လူငယ်တွေအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို မှန်းဆလို့ရပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ –“ငါ့ရဲ့ကလေးက ဒီလိုမျိုးကစားနေတာသိရင် စိတ်သက်သာမလား?”
အချို့သူများအတွက်တော့ ဂိမ်းက ကျန်းမာရေး နှင့် မညီညွတ်သော လူနေမှုပုံစံကို အားပေးသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါမယ်။ သို့သော် ဒီထင်မြင်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရာတစ်ခုခုသို့ ပြောင်းလဲဖို့ ဒီရိုးရှင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေနဲ့ စတင်တာက အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleMobile Legends Season အပြီး: Season 19 အပြီးမှာ သင်ဘယ် Rank ရရှိခဲ့ သလဲ?
Next articleValorant ဆိုင်မှ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လိုချင်တဲ့ လက်နက် Skin များ